Senator Qaybdiid “Dowladda waxaa ay hormar ka sameysay arrimaha maamulka, maaliyada iyo dhaqaallaha” – Kalfadhi
Senator Qaybdiid “Dowladda waxaa ay hormar ka sameysay arrimaha maamulka, maaliyada iyo dhaqaallaha”
Guddoomiyaha gudiga dastuurka ee Aqalka sare ee Baarlamanka Soomaaliya Senator Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid, oo ka hadlayay xaaladda dalka Soomaaliya ayaa sheegay in ay jiraan arrimo ku-saabsan hormaro iyo dib-u-dhac uu dalka sameeyay.
Mudane Qaybdiid, ayaa aaminsan in aan la dafiri karin hormarka dalka uu ka sameeyay arrimaha maamulka, maaliyada iyo dhaqaallaha, iyo sida hadda lagu gaaray in dalka laga cafinayo deyamo gaar ah.
“Dadka howshan wada ee maamulka, xukuumadda oo uu Ra’iisul Wasaaraha ka madax yahay waxaa ay sameyeen wax badan oo wanaag ah, kuwaasna ma ahan wax la inkiri karo”, ayuu yiri.
Dhinaca kale, Gudoomiyaha gudiga dastuurka ee Baarlamanka Soomaaliya, ayaa aaminsan in amniga dalka uu tallaabooyin uu gadaal u qaaday. Waxaa uu tusaale usoo qaatay in dowladda ay ciidamo aan loo baahneyn ay geysnay gobolka Gedo, halkaasi oo aan ka jirin amni darro iyo qaraxyo.
Xaaladda amniga ee dalka Soomaaliya, ayaa ah halka inta badan ay siyaasiyiinta ay ka hadlaan, iyadoo dhawaan ay kordheen weerarada al Shabaab ay ka geysanayaan gudaha dalka, gaar ahaan sal-dhigyadda ciidamada dowladda.
Guddoomiyha Golaha shacabka oo ka qeyb-gallay kulan lagu furayay kalfadhiga 8-aad ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Jabuuti
Madaxweynaha dowlad-gobolleedka Galmudug oo saxiixay miisaaniyadda sanadka